I eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa umshini endleleni sonke sibhekana. Kodwa uma kwezinye izimo, umshayeli Ungasusa umonakalo bebodwa (isibonelo, esikhundleni isondo), kuyilapho abanye uqala sokuba netwetwe, ubambe ikhanda lakhe ucabange ukuthi sizokwenzenjani. Ezimweni ezinjalo zihlanganisa ukwehluleka futhi uphethiloli, okungukuthi ukuvuza uphethiloli kusuka ethangini. Noma kunjalo, emigwaqweni Russian kwenzeka eziningi lezimanga, hhayi iqiniso lokuthi ngeke ufike lapho uya khona ngesikhathi. Nokho kukhona izindlela ezingakusiza ukwenza ukulungisa uphethiloli ithangi futhi akavumi ukuba iloli donsa.
Ake sibheke kuqala ukuthi ungakwazi ukuchaza umgodi ethangini. A uphawu ukwehluleka kungaba iphunga eqinile uphethiloli emotweni. Futhi uma unomuzwa wokuthi imoto inuka uphethiloli, uyeke ngokushesha bese ubheka ukufundwa inzwa level uphethiloli. Uma ngomzuzwana, lesi sibalo incipha, kusho udinga ukulungisa ophuthumayo uphethiloli.
Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona ukuqeda imigodi emigwaqweni. Omunye wabo kuhlanganisa izinyathelo ezilandelayo. Uma usuwatholile endaweni, lapho evela uphethiloli eyolanda umshudo, bayamba imbobo ethangini ukuze udlulela ngale ngokuphelele ibhawudo, faka umshudo emgodini, ukubeka Washer iraba gasket, bese qinisa nut. Ngaphandle ukusetshenziswa spacers, ngeke uze ukwazi ukuvimbela ukuvuza uphethiloli, njengoba wenza isondo sealant umsebenzi kuleli cala. Ukulungisa kwemishini ngendlela ingasetshenziswa kuphela esimweni lapho isitsha has a endaweni enkulu, futhi imvume phansi umshini ikuvumela ukukhiqiza umgodi sokuprakthiza.
Ukulungisa ethangini fuel: indlela inombolo ezimbili
Indlela odlule azofanela ngokuphelele labo ababengenawo i-ikhamera owengeziwe amathayi. Indlela elandelayo ngaphandle ukusetshenziswa kwale nto nje abakwazi ukukwenza. I enhle samuntu intando ekamelweni elolini, njengoba kuba thickest. Kodwa ambalwa izogcinwa ugibele imoto yakhe izingxenye ezisele for imoto esindayo, ngakho ake sicabange ngendaba ka-ukusetshenziswa umgibeli cell. Ngemuva kokuthola umgodi, kufanele ucabangele ngokucophelela lingakanani kanye esikalini kokuvuza, futhi kuphela emva kwalokho unquma kufanele ube mkhulu kangakanani isichibi zenjoloba. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi endaweni ezimanzi asifanele ukulungisa, ngoba imizuzu emihlanu kamuva, wamane uzonyamalala. Ngakho, ngemva kokuba ukusika isichibi, udinga ukunamathisela ke ebusweni ethangini ukuze ukukhanda uphethiloli ithangi.
Uma endaweni ukubekwa uphawu ingenkulu kakhulu, njengoba ilungu asizayo sebenzisa njalo glue "Moment". Lapha-ke kumelwe kukhunjulwe ukuthi ukukhetha imikhiqizo amazwe ngeke ziveza isesimweni esihle. Ukuze uphawu izimbobo ukhethe brand kuphela yasekhaya glue. Phela, ukukhanda fuel amathangi okunjalo akukhona zesikhashana futhi umshini ngesikhathi esifanayo ingasebenza ungaphazamisekile iminyaka 2-3.
Uma une kancane uyisicefe ngesimo ngesibhakela ethangini gas, ungalilahli ithemba, ngoba ngosizo ngokurhaba kusho ukuthi ngeke kalula ukubhekana nale nkinga futhi ngokunembile ufike lapho uya khona.